၂၀၁၇ မှာ ၀ယ်သင့်တဲ့ Android ဖုန်းတွေအကြောင်း – MyTech Myanmar
၂၀၁၇ မှာ ၀ယ်သင့်တဲ့ Android ဖုန်းတွေအကြောင်း
IT ခေတ်ကိုရောက်လာတာနဲ့အမျှ ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကလည်း ဖုန်းတွေကို သူအပြိုင်ကိုယ်အပြိုင် ဆန်းသစ်ထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိတဲ့ဖုန်းတွေထဲက နည်းပညာချစ်သူတို့ ၀ယ်သင့်တဲ့ဖုန်းလေးတွေအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။
၁. Samsung Galaxy S7 Edge
အလေးချိန် ၁၅၇ ဂရမ်သာ ရှိပြီး Dimension 150.9×72.6×7.7 mm ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင် အရွယ်အစား ၅.၅ လက်မ ရှိတာကြောင့် သင့်တော်တဲ့ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားရှိတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ဖုန်းရဲ့ Resolution ကတော့ 1440 × 2560 ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမှာပါဝင်တဲ့ Ram ကတော့ 4GB ရှိပြီး အတွင်းမှတ်ဥာဏ် (Memory ကတော့ 32GB/ 64GB ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ 3600mAh ရှိပါတယ်။
ကင်မရာအရည်အသွေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ကင်မရာ 12 Mp ရှိပြီး အရှေ့ကင်မရာကတော့5MP သာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Sensor နည်းပညာနဲ့ ဆန်းသစ်ထားပါတယ်။ သူ့ကိုရေးတဲ့ Review တွေထဲမှာတော့ လှပတဲ့ မျက်နှာပြင်ရှိပြီး၊ ကိုင်သွယ်ရကောင်းသလို၊ ကင်မရာအရည်အသွေးလည်းကောင်းတယ်လို့ ပြောထားကြပါတယ်။ ဈေးကြီးတယ်လို့တော့ ဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်။
၂. Samsung Galaxy S7
ဒီဖုန်းရဲ့အလေးချိန်ကတော့ ၁၅၂ ဂရမ်ရှိပြီး Dimensions ကတော့ 142.4 × 69.6 × 7.9 mm ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကတော့ 5.1-inch (လက်မ) ရှိပြီး Resolution က 1440 × 2560 ရှိပါတယ်။ Ram က4GB ရှိပြီး အတွင်းမှတ်ဥာဏ် (Internal Storage/Memory) ကတော့ 32 GB/64 GB ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ အပြင်ကဒ်ထပ်ဆိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 200 GB ထိ ဆိုက်လို့ရပါတယ်။
ဘက်ထရီကတော့ 300 mAh ရှိပြီး အနောက်ကင်မရာ 12 MP နဲ့ အရှေ့ကင်မရာကတော့5MP ရှိပါတယ်။ ကင်မရာကောင်းတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ ရေစိုခံဒီဇိုင်းကိုထုတ်လုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
၃. LG G5
အလေးချိန် ၁၅၉ ဂရမ်ရှိပြီး Dimension 149.4 × 73.9 × 7.7 mm ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကတော့ 5.3 Inch(လက်မ) ရှိပြီး Resolution 1440 × 2560 ပါ။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသေးငယ်ပေမဲ့ 2K Display ဖြစ်လို့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို ကြည့်ရှု့နိုင်မှာပါ။ Ram 4GB ရှိပြီး Internal Storage 32 GB ရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ 2800mAh ပါ။
အနောက်ကင်မရာ 16 MP/8 MP ရှိပြီး အရှေ့ကင်မရာကတော့ 8 MP ရှိပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းမွန်ပြီး ကင်မရာကိုလည်း မြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်ကူနိုင်တဲ့ ဖုန်းတစ်မျိုးပါ။
၄. Moto Z
ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံးဖုန်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Moto Z ဖုန်းရဲ့ အလေးချိန်ကတော့ 136g ရှိပါတယ်။ Dimension့ တော့ 153.3 × 75.3 × 5.2 mm ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 5.5 Inch (လက်မ)ရှိပြီး Resolution 1440 × 2560 ပါ။ Ram 4GB ရှိပြီး Internal Storage 32/64GB ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ 2600mAh ရှိပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာ 13 MP ရှိပြီး အရှေ့ကင်မရာ5MP ရှိပါတယ်။
၅. HTC 10
ဂီတချစ်သူတွေအတွက် သိပ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အသံစနစ်ကို အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်ထားပြီး သီချင်းနားထောင်တဲ့အခါ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အသံမျိုးကို ခံစားရရှိစေမှာပါ။ ဒီဇိုင်းကလည်း အရမ်းလှပါတယ်။
ဒီဖုန်းရဲ့အလေးချိန်ကတော့ 161g ရှိပြီး Dimension 145.9 × 71.9 ×9mm ရှိပါတယ်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ၅.၂ လက်မဖြစ်ပြီး Resolution 1440 × 2560 ဖြစ်ပါတယ်။ Ram4GB, Storage 32GB/64GB ပါ။ ဘက်ထရီကတော့ 3000mAh ရှိပြီး အနောက်ကင်မရာ 12 MP အရှေ့ကင်မရာ5MP ရှိပါတယ်။
၆. Motorola Moto Z Play
Motorola Moto Z Play ဖုန်းကတော့ အလေးချိန် ၁၆၅ ဂရမ်ရှိပြီး Dimensions: 156.4 × 76.4 × 7mm ရှိပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကတော့ 5.5 Inch(လက်မ) ရှိပြီး Resolution: 1080 × 1920 Pixels ရှိပါတယ်။ RAM:3GB, Storage : 32 GB ရှိပါတယ်။ အပြင်ကဒ်အနေနဲ့လည်းထပ်ဆိုက်လို့ရပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ 3510 mAh ရှိပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာ 16 MP အရှေ့ကင်မရာ5MP ရှိပါတယ်။
၇. Lenovo P2
Lenovo P2 ဖုန်းရဲ့အလေးချိန်ကတော့ ၁၇၇ ဂရမ်ရှိပါတယ်။ Dimensions: 153 × 76 × 8.3 mm, ဖုန်းအရွယ်အစား ၅.၅ လက်မ၊ Resolution : 1080 × 1920 Pixels ရှိပါတယ်။ RAM:4GB , Storage : 32 GB ရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ 5100m Ah ရှိလို့ တာရှည်ခံတဲ့ဘက်ထရီတစ်မျိုးပါပဲ။ အနောက်ကင်မရာ 13 MP အရှေ့ကင်မရာ5MP ရှိပါတယ်။ အားသာချက်ကတော့ ဖုန်းတည်ဆောက်ပုံကောင်းမွန်ပြီး ဘက်ထရီခံပါတယ်။ ဘက်ထရီအရမ်းကြီးတာကြောင့်လည်း ဖုန်က လေးပါတယ်။
၈. Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZ ကတော့ အလေးချိန် ၁၆၁ ဂရမ်ရှိပါတယ်။ Dimension: 146 × 72 × 8.1mm ပါ။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ၅.၂ လက်မရှိပြီး Resolution 1920×1080 ဖြစ်ပါတယ်။ RAM: 3GB , Storage: 32GB ရှိပြီး ဘက်ထရီကတော့ 2900mAh ရှိပါတယ်။
အနောက်ကင်မရာ 23 MP ရှိပြီး အရှေ့ကင်မရာကတော့ 13 MP ရှိပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ ဒီဇိုင်းကို ဆန်းသစ်ထားတာတွေ့ရပြီး ကင်မရာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်း အံ့မခန်း တိုးတက်လာပါတယ်။ စခရင်က Full HD ကြည့်လို့ရပါတယ်။
MyTech Myanmar2017-05-26T18:16:15+06:30April 9th, 2017|Mobile Phones, Reviews|